Shiinaha LED-ka Soo-celinta Iftiinka Degdegga ah ee Soosaarka iyo Warshada |Saselux
Iftiinka gurmadka degdega ah wuxuu wataa 12PCS SMD LED.Waxay leedahay koronto aad u ballaaran: 120-277V.Wax soo saarku waa 2.4W max.Muddada xaaladdu degdega ahina waa in ka badan 90 daqiiqo ka dib korontadda.Waxaan u isticmaali karnaa meel qoyan, ma qoyanCimrigu waa 50000 saacadood.
*Nambarka Model: CR-7012
* Darbiga oo kor loo qaado
*Input Voltage: 120-277VAC 60Hz
*Super dhalaalaya SMD LED 2x1.2W
*Cabir: 260.8 x 105 x 59.2 CM
①[Tayo Sare & Raqiis ah] Iftiinka degdega ah waxa uu ka samaysan yahay guryaynta heerkulbeeg-ku-duray oo leh heer injineernimo.Si sahal ah uma dhaawacmo marka xaalad degdeg ahi dhacdo.Qiimahayaguna waa tartan.
②[Battery Waara] Baytariga kaydinta loo isticmaalo iftiinka degdega ah wuxuu dib u dallaci karaa 500 jeer wuxuuna shaqeeyaa 45000 daqiiqo ugu yaraan.Kaydinta batteriga waxay socon kartaa in ka badan 90 daqiiqo ka dib dallaal buuxa.
③[Si sahlan loo rakibo] Iftiinka degdega ah wuxuu noqon karaa darbi ama saqafka.Tallaabooyinka rakibidda waa sahlan yihiin.Waxaan ku siin doonaa buug-tilmaameed.Waxaad ku ogaan kartaa heerka iftiinka degdega ah adigoo isticmaalaya badhanka tijaabada iyo iftiinka tusaha.Dhammaan qalabyada ayaa lagu daray.
④ [Dammaanadda 5-sano] Waxaan ballanqaadeynaa 5-sano dammaanad ah qaybaha korantada iyo guriyeynta, 2-sano oo dammaanad ah batteriga.Haddii aad wax su'aal ah ka qabto tayada, fadlan xor u noqo inaad nala soo xiriirto.
⑤[Iftiinka xagal badan] Madaxa nalalka LED waa kuwo la hagaajin karo oo iftiin la'aan ah.Dabacsanaanta jihada iftiinka waxay kuu ogolaaneysaa inaad ku muujiso nalalka ku dhawaad ​​xagal 90 darajo.Iftiinka hore ee LED wuxuu shaqeeyaa isla markiiba marka korontadu xumaato.
Hore: Nalalka LED-ka ee Degdegga ah ee La Dambeyn Karo Meel Qoyaan ah
Xiga: Ilayska Bixinta Degdegga ah ee Madaxa ee la hagaajin karo
IP65 Bulkhead Qalabka Darbiga Degdegga ah
Nooca Cusub ee Gurmadka Dabka
CR-7043 LED Birta Degdegga ah ee Dhibcaha Mataanaha